Ngaba uTamiflu uyasebenza? Ngaba kufanelekile ukuthatha? - Ulwazi Lweziyobisi | Eyenkanga 2021
Inkampani, Ulwazi Lweziyobisi Imfundo Yezempilo Ulwazi Lweziyobisi Iziyobisi Vs. Umhlobo Inkampani Imfundo Yezempilo, Izilwanyana Zasekhaya Iindaba, Impilo Imfundo Yezempilo, Iindaba Imfundo Yezempilo, Impilo Iindaba Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo Ulwazi Lweziyobisi, Iindaba Impilo-Ntle Imidlalo Enzima Inkampani, Imfundo Yezempilo
Eyona >> Ulwazi Lweziyobisi >> Ngaba uTamiflu uyasebenza?
Ngaba uTamiflu uyasebenza?
Kungenxa yokuba ixesha lomkhuhlane lichaphazela abantu abaninzi ngonyaka, oko akuthethi ukuba yintsholongwane ukuthatha kancinci. Inokuba neengxaki ezinzulu, ngakumbi kubantu abathile. Ukuba ukwiqela elinomngcipheko omkhulu, umboneleli wakho wezempilo unokuyalela Tamiflu (oseltamivir phosphate ) kumqondiso wokuqala weempawu zomkhuhlane. Oogqirha abathathu bachaza ukusebenza kweTamiflu, kunye nendlela yokwazi ukuba kufuneka uyithathe na.
Ezinxulumene: Yintoni umkhuhlane?
Wenza ntoni kanye kanye uTamiflu?
I-Tamiflu sisiyobisi esiyintsholongwane ethintela umkhuhlane u-A kunye no-B ngokuhlasela intsholongwane kwaye uyiyeke ekuphindaphindeni, ngokuka Ukutya kunye noLawulo lweziyobisi (FDA) . I-Tamiflu ayisebenzi kwezinye iintsholongwane okanye usulelo lwebacteria.
Ukulungiselela-funda: ukufumana iyeza lokugonya umkhuhlane lonyaka-yeyona ndlela ilungileyo yokuphepha ukubamba esi sifo siphefumla. Ngamanye amaxesha i-Tamiflu isetyenziselwa ukuthintela umkhuhlane kubantu abachaphazeleka kwintsholongwane yomkhuhlane, kodwa ayisiyongqangi esebenzayo yokugonya.
Ukuba ufumana umkhuhlane, iTamiflu inokunciphisa ubunzima beempawu kunye nokunciphisa ixesha oziva ugula ngalo.
Ezinxulumene: Ufumana njani isaphulelo (okanye simahla) umkhuhlane
Usebenza njani uTamiflu?
I-Tamiflu inganciphisa iingxaki zomkhuhlane (njenge-pneumonia) nge-44%, kunye nomngcipheko wokulaliswa esibhedlele ngama-63% xa uthathwe kwiiyure zokuqala ezingama-48 emva kokufumana intsholongwane, ngokutsho kwabenzi beTamiflu. Xa isetyenziselwa ukuthintela umkhuhlane kubantu abachaphazeleka kwintsholongwane, kunciphisa amathuba okuba bagule ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-55, itsho IZiko leLizwe loPhando ngezeMpilo .
I-Tamiflu ayilonyango lomkhuhlane, uyachaza UMichael Carnathan, MD , ugqirha wosapho eBethlehem, ePennsylvania. Ayizukuzisusa ngokupheleleyo zonke iimpawu zakho, kodwa ihlala ifutshane nexesha leempawu. Isebenza kakhulu xa iqalwa kwiiyure zokuqala ezingama-24 ukuya kuma-48 emva kophawu lokuqala. Musa ukoyika ukunxibelelana nogqirha wakho xa umqondiso wokuqala womkhuhlane kunye neentlungu zomzimba.
Ezinxulumene: Ngaba umkhuhlane udubule okanye iTamiflu ithintela i-COVID-19?
Ngaba iTamiflu isebenza emva kweeyure ezingama-48?
Andiqinisekanga ukuba unempawu zomkhuhlane? Unokuvuka unefiva kunye nehlaba kunye neentlungu, okanye ungabuya ekhaya ungaziva mnandi. Iimpawu zomkhuhlane zihlala zivela ngesiquphe kwaye zikwenza uzive ngathi ubethwe liloli kaMack, utsho UGenevieve Browning, MD Ugqirha wamayeza osapho kunye neNovant Health eCharlotte, North Carolina. Kwaye umqondiso wokuqala weempawu kuxa ufuna ukwenza into. Ngenxa yokuba kukho iwindow emfutshane yexesha lokuthatha i-Tamiflu ke iyasebenza, kungcono ukuba unxibelelane nogqirha ngokukhawuleza. Emva kweeyure ezingama-48, kunokuba kulunge ukuthatha iTamiflu.
Usebenza ngokukhawuleza kangakanani uTamiflu?
Ukwenzela i Unyango lomkhuhlane , I-Tamiflu kufuneka ithathwe kwiintsuku ezintlanu emva kokuqala kweempawu zomkhuhlane. Abantu abadala kunye nolutsha (iminyaka eli-13 nangaphezulu) banokuthatha i-75 mg kabini ngemini kangangeentsuku ezintlanu. Iimpawu zomkhuhlane zihlala zihlala iintsuku ezintlanu ukuya kwezisixhenxe , Kodwa iTamiflu inokunciphisa ixesha kunye nobunzima beempawu zomkhuhlane.
Uhlala ixesha elingakanani usuleleka ngumkhuhlane emva kokuthatha iTamiflu?
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba usosulela emva kokuthatha iTamiflu. Intsingiselo, ungayidlulisela intsholongwane kwabanye, ke ngenxa yokuba uqala amayeza antiviral ayithethi ukuba ungaphuma uhambe.
Ukuba ucinga ukuba unomkhuhlane, kuya kufuneka usoloko ubiza umnikezeli wakho wezempilo endaweni yokulinda ubone ukuba uyaphucula na. Kungcono uxelelwe ukuba awunayo kunokuba uyeke ukubiza umnxeba kwaye usokole kangangeveki okanye nangaphezulu kweempawu ezityhafisayo.
Ngaba iTamiflu ikhuselekile?
I-Tamiflu ikhuselekile kakhulu , kwaye iyasebenzaabaguli abancinci njengeeveki ezi-2 ubudala. Nangona kunjalo, kuya kufuneka usoloko uxoxa ngezibonelelo kunye nomngcipheko wokuthatha iTamiflu kunye nomboneleli wakho wezempilo.
I-Tamiflu inokuba neziphumo ebezingalindelekanga (zihlala zenzeka kwiintsuku ezimbini zokuqala), kwaye kwabanye abantu, eziinokuba mbi ngaphezu kokuba nomkhuhlane, ngokukaGqirha Brauning. Iziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo zeTamiflu zibandakanya:
Ngokuka-FDA, abantwana kunye nolutsha olunomkhuhlane basemngciphekweni owandayo weziphumo ebezingalindelekanga ezinjengokubanjwa, ukudideka kunye nokuziphatha okungaqhelekanga. Nangona i-FDA ivume iTamiflu yabantwana abancinci, uGqirha uBrauning uhlala elumkile xa emisela abantwana ngenxa yeziphumo ebezingalindelekanga. Kufuneka uqhagamshelane nodokotela wezilwanyana ngaphambi kokuba unike uTamiflu.
Ngubani omele (kwaye akafanelekanga) ukuthatha uTamiflu?
I-Tamiflu ilungele abaguli abasemngciphekweni omkhulu wokufumana iingxaki ezinzima kwintsholongwane yomkhuhlane. Oku kubandakanya abantwana abancinci kakhulu, abagugileyo, abaguli abangaxhomekeki emzimbeni, abaguli abanesifo seswekile, isifo sentliziyo, isifuba, nezinye izifo ezinganyangekiyo, kunye nabahlali bamakhaya abalupheleyo.
Izigulana ezinobuthathaka obuthile ukuya kokuphakathi zinokuthatha ngokukhuselekileyo iTamiflu. Izigulana ezinesifo esibi sesibindi kufuneka zithethe nogqirha wazo malunga nokuba kukhuselekile na ukuthatha iTamiflu. Mnan izigulana ezinemicimbi yezintso ezinobumnene okanye ezinesifo se-renal sokugqibela kunye ne-dialysis, idosi yeTamiflu inokuhlengahlengiswa. Kodwa, iTamiflu ayikhuthazwa kubantu abanezifo ze-renal zokugqibela kwaye abekho kwi-dialysis.
Amaziko Okulawula Nokuthintela Izifo ( i-CDC ikwacebisa I-Relenza (zanamivir) , Rapivab (peramivir), kunye Xofluza (baloxavir marboxil) . Ukuba i-Tamiflu ayikufanelanga, usenokucela umboneleli wakho wezempilo malunga nolunye unyango lomkhuhlane ukongeza kwiyeza kunye nokuncedisa ukunciphisa iimpawu kunye nokunyusa amajoni akho omzimba.
Ezinxulumene: Tamiflu vs Xofluza
Ngaba uTamiflu ukhuselekile ukuba ukhulelwe?
Abasetyhini abakhulelweyo kufuneka bafune uncedo kwezonyango xa beqala ukubona umkhuhlane kuba basemngciphekweni omkhulu weengxaki zomkhuhlane, utshilo UAlyse Kelly-Jones, MD , ugqirha wamazinyo kunye neMpilo eNovant eCharlotte, North Carolina. Umkhuhlane uyingozi koomama abakhulelweyo nakwiintsana zabo. Inokubulala ngexesha lokukhulelwa, kwaye inyusa nomngcipheko wokusebenza ngaphambi kwexesha, ebeka umntwana emngciphekweni weengxaki zempilo, utshilo.
Ngenxa yokuba kungekho zifundo ezilawulwa kakuhle kubasetyhini abakhulelweyo, uTamiflu uya kumiselwa kuphela ukuba ugqirha wakho uziva ngathi izibonelelo zingaphezulu kobungozi obunokubakho kwimveku. Nangona kunjalo, kwisibonakaliso sokuqala seempawu, okanye ukuba uqhuba umkhuhlane, kufuneka uqhagamshelane nomboneleli wakho oyintloko ngokukhawuleza. Kuba iiofisi ezininzi zikhetha ukungabinamntu onomkhuhlane kwigumbi lokulinda (apho banokusasaza khona kwabanye abantu), unokufumana unyango ngomnxeba. Ukuba ufumana iimpawu ezongezelelekileyo njengokuphefumla kancinci, iintlungu zesifuba, okanye ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni, jonga unyango olukhawulezileyo ukubona ukuba ngaba kufuneka unyango na.
Ezinxulumene: Ngaba ndingawufumana umkhuhlane xa ndikhulelwe?
Nini ukubiza ugqirha wakho
Iimpawu zomkhuhlane zibandakanya umkhuhlane, ukugodola, iintlungu zomzimba, ubuthathaka, kwaye kunokubandakanya umqala obuhlungu, intloko ebuhlungu, okanye ukukhohlela. Ngelixa ukubanda okuqhelekileyo kuza ngokuthe ngcembe, iimpawu zomkhuhlane zibonakala ngokukhawuleza. Ukuba ufumana naziphi na kwezi mpawu okanye uvezwe kumntu ofunyenwe ngumkhuhlane, kuya kufuneka ubize iofisi kagqirha wakho ukuze ubone ukuba uTamiflu ukulungele na. Khumbula, iiyure zokuqala ezingama-48 zibaluleke kakhulu kunyango olusebenzayo lomkhuhlane, ke ungathandabuzi ukwenza loo mnxeba.
Yintoni i-insulin? Iimpawu eziqhelekileyo kunye nendlela ezisebenza ngayo
Iziphumo ebezingalindelekanga zikaVyvanse kunye nendlela yokuzikhusela
yintoni ipilisi efanelekileyo yolawulo lokuzalwa
indlela yokusebenzisa iapile cider iviniga losulelo igwele
ibuprofen 600 mg yeyantoni
athini amanqanaba eswekile yegazi emva kokutya
ixabisa malini i-sertraline ngaphandle kwe-inshurensi kwi-walmart
Ngaba ukuthatha ibhafu kunceda usulelo lwegwele
yintoni iswekile esegazini eqhelekileyo yokuzila ukutya